Rori scale Factory - China Truck scale vagadziri, vatengesi
Gomba rerudzi rwehuremu rinonyanya kukodzera nzvimbo dzine nzvimbo shoma senzvimbo dzisiri makomo uko kuvakwa kwegomba kusiri kudhura zvakanyanya. Sezvo chikuva chiri mudenga neivhu, mota dzinogona kusvika pahuremu kubva chero nzira. Mazhinji veruzhinji mabhuremu emagetsi anofarira dhizaini iyi.
Huru maficha mapuratifomu akabatana kune mumwe nemumwe zvakananga, hapana ekubatanidza mabhokisi pakati, iyi inguva yakagadziridzwa vhezheni inoenderana neshanduro dzekare.
Dhizaini nyowani inoita zvirinani pakuyera marori anorema. Kamwe dhizaini iyi ikatangwa, inozove inozivikanwa munguva pfupi mumimwe misika, inogadzirirwa kuita inorema, kazhinji, kushandiswa kwezuva nezuva. Terevhizheni inorema uye pamusoro-pemugwagwa muhuremu.
HOT DIPPED GALVANIZED DECK PIT YAKAKOMEDZWA KANA YAKASIMBISWA YAKAKOMEDZWA
* Plain ndiro kana cheki ndiro ndeyokusarudza
* Yakaumbwa 4 kana 6 U matanda uye C chiteshi matanda, akasimba uye akaomarara
* Middle akaparadzaniswa, aine bhaudhi kubatana
* Double shear danda mutoro sero kana compression mutoro sero
* Upamhi hunowanikwa: 3m, 3.2m, 3.4m
* Yakareba kureba kunowanikwa: 6m ~ 24m
* Max. Unyanzvi hunowanikwa: 30t ~ 200t
Pallet rori chikero
Yakakwira-chaiyoiyo sensor inoratidza yakanyanya kurema kuyerwa
Muchina wese unorema anenge 4.85kgs, inotakurika uye isina huremu. Munguva yakapfuura, yechinyakare masitayera aive anopfuura makirogiramu masere, ayo akaremerwa kutakura.
Chiedza chakareruka, huwandu hwakazara hwe75mm.
Yakavakirwa-mukati yekuchengetedza mudziyo, kudzivirira kumanikidzwa kweiyo sensor. Iyo waranti f rimwe gore.
Aluminium alloy zvinhu, yakasimba uye yakasimba, sanding pendi, yakanaka uye ine rupo
Stainless simbi chikero, nyore kuchenesa, ngura-chiratidzo.
Chajajajajaja reApple. Nekamwe kubhadharisa, inogona kupedza maawa zana nemakumi masere.
Dhinda bhatani "unit kutendeuka" zvakananga, zvinogona kushandura KG, G, uye
Bata Pallet chikero - Inosarudzika Kuputika-chiratidzo Chiratidziro
Bata mhando pallet rori chikero zvakare inonzi mobile pallet rori zviyero zvinoita kuti kurema kuve nyore.
Bata pallet zviyero zvemarori zvinogona kuyera zvinhu panguva yekufamba panzvimbo yekufambisa mutoro kuenda pachikero. Inogona kuchengetedza yako yekushanda nguva, kugadzirisa basa rako kugona. Sarudzo dzakasiyana siyana, unogona kusarudza zviratidzo zvakasiyana uye saizi pallet zvinoenderana nekuwanda kwako. Izvi zviyero zvinounza yakavimbika kuyera kana kuverenga mhedzisiro kwese kwaanoshandiswa.
Konkrete dhizaini yekuyera pamusoro-pemugwagwa nzira dzemutemo mota.
Iyo yakasanganiswa dhizaini inoshandisa kongiri yekongiri ine modular simbi sisitimu. Iyo kongiri mapani anouya kubva kufekitori akagadzirira kugamuchira kongiri pasina chero munda wewelding kana rebar kuiswa kunodiwa.
mapani anouya kubva kufekitori akagadzirira kugamuchira kongiri pasina chero simbi yekumisikidza kana kuisa rebar kuiswa kunodiwa.
Izvi zvinorerutsa kumisikidza uye inovimbisa huwandu hwese hwedheka.
MUGWAGWIRO / BHURIDHI KUDZIVA KUTARISIRA uye KUYESA SYSTEM
Gadzira isina-kumira oveload yekuziva poindi, uye unganidza mota ruzivo uye mhan'ara kune ruzivo rwekudzora nzvimbo kuburikidza nehigh-inomhanya ine simba yekuyera system.
Iyo inogona kuziva nhamba yemapureti emotokari uye pa-saiti humbowo kuunganidzwa sisitimu yekuzivisa iyo yakaremerwa mota kuburikidza neyakajeka manejimendi sisitimu yesainzi kudzora kwe overlad.
Inoshandiswa zvakanyanya muhuremu hwakaderera-kukosha zvinhu mukutakura, kuvaka, simba, kuchengetedza kwezvakatipoteredza nemamwe maindasitiri; kugadziriswa kwekutengeserana pakati pemafekitori, migodhi uye mabhizinesi, uye mota axle mutoro wekutarisa emakambani ekufambisa. Kukurumidza uye kwakaringana kuyera, nyore kushanda, kuisirwa nyore uye kugadzirisa. Kuburikidza nekuyera ekisero kana ekisero reboka rehuremu remotokari, huremu hwese hwemotokari hunowanikwa kuburikidza nekuunganidza. Iyo ine mukana weiyo diki pasi nzvimbo, shoma hwaro kuvakwa, nyore kutamisazve, ine simba uye static hunyambiri kushandiswa, nezvimwe.
Nesimbi ramp, inobvisa iyo civil foundation basa kana kongiri ramp ichave zvakare anoshanda, ayo anongoda mashoma hwaro basa. Panodiwa chete tsime rakaomeswa rakaomarara uye rakatsetseka. Maitiro aya anowedzera kuchengetedza mumutengo webasa revashandi uye nguva.
Iine matombo esimbi, iyo weightbridge inogona kubviswa uye kuunganazve mukati menguva pfupi yenguva, inogona kugara ichiendeswa padyo padyo nenzvimbo yekushanda. Izvi zvinobatsira zvakanyanya mukuderedza lead lead, kudzikisira kwekubata mutengo, simba revashandi, uye nekukosheswa kunoonekera mukugadzirwa.
Yakasimba emagetsi njanji chikero mudziyo unorema wezvitima zvinomhanya pane njanji. Chigadzirwa chine yakapusa uye yakarongeka mamiriro, kutaridzika kwakanaka, kukwirira kwakaringana, kuyera kwakaringana, kuverenga kwakajeka, kumhanyisa kuyerwa kumhanya, kugadzikana uye kuita kwakavimbika, nezvimwe
Heavy Duty Dhijitari Floor Zviyero Industrial Yakaderera Mbiri Pallet Scale Carbon Simbi Q235B
Iyo PFA221 yepasi chiyero igadziriso yakakwana yekuyera iyo inosanganisa yakakosha muyero chikuva uye terminal. Yakanakira kurodha mateki uye zvivakwa zvekugadzira-zvakawanda, iyo PFA221 chikuva chikuva chinoratidzira isina niplip-dhayamita pamusoro inopa tsoka dzakachengeteka. Iyo yedhijitari terminal inobata akasiyana siyana kuyera mashandiro, kusanganisira nyore kurema, kuverenga, uye kuunganidza. Iyi pasuru yakanyatsogadziriswa inopa chaiyo, yakavimbika kuyera pasina iyo yekuwedzera mutengo wezvinhu izvo zvisina kudikanwa kune zvakakosha kuyerwa kunyorera.
5 Ton Dhijitari Platform Floor Scale NeRamp / Inotakurika Maindasitiri Ehurongwa
Zviyero zvepasi zveSmartweigh zvinobatanidza kurongeka kwakasimba nekusimba kwekumira munzvimbo dzakaomarara dzemabhizimusi. Izvi zviyero zvinorema-basa zvakavakwa nesimbi isina chinhu kana pendi kabhoni simbi uye zvakagadzirirwa kusangana zvakasiyana siyana zveindasitiri zvine huremu zvido, kusanganisira batching, kuzadza, kuyera-uye kuverenga. Zvigadzirwa zvakajairwa zvakapendwa simbi nyoro kana simbi isina chinhu mu0.9 × 0.9M kusvika 2.0 × 2.0M saizi uye 500Kg to10,000-Kg kugona. Rocker-pini dhizaini inovimbisa kudzokorora.
3 Ton Maindasitiri Pasi Pasi Kuyera Zviyero, Warehouse Floor Scale 65mm Platform Urefu
Iyo PFA227 pasi chiyero chinosanganisa kuvaka kwakasimba, nzvimbo dziri nyore kuchenesa. Iyo inogara yakasimba zvakakwana kuti ipe chaiyo, yakavimbika uremu paunenge wakamira kuti ugare uchishandiswa munzvimbo dzakanyorovera uye dzinokanganisa. Yakagadzirwa zvachose yesimbi isina simbi, inokodzera mashandiro ehutsanana ayo anoda kuwachwa kazhinji. Sarudza kubva pamhando dzakasiyana dzekupedzisa izvo zvinoramba kukwenya uye zviri nyore chaizvo kuchenesa. Nekuderedza nguva uye kuyedza kunodiwa pakuchenesa, iyo PFA227 pasi chiyero chinokubatsira iwe kuwedzera kugadzirwa.
Kuchengeta Misa, Kuyera Kurema Set, Certified Weights, Scale Kuchengetedza Kurema, Sheuri Beam Load Cell, Calibration Zviyero zveDhijitari Scales,